victoire-rasoamanarivo.it | Page 2 |
Araka ny efa fantatsika dia handeha hisotro ronono i mompera Pierre Emile, "aumônier" an'ny katolika malagasy atý Italia ka i mompera Athanase Rafanoharantsoa no handimby azy amin'ny fitantanana ny...Read more
Fanolorantena mandrakizay tao amin'ny Fikambanandr'i masera Md Joany Batista
Nahavita ny fanolorantenany mandrakizay teto Roma omaly 1 septambra 2017 izy 4 mirahavavy ao amin'ny Fikambanan'i Masindahy Joany Batista. Mandray tànana sy miarahaba azy ireo ny Ankohonana manontolo...Read more
Famaranana ny taona pastoraly 2016-2017
Tontosa soa aman-tsara ny fiaraha-mivavaka sy fitondrana am-bavaka ny Ankohonana amin'izao fiatahana kely ny fiangonana S.Macuto izao, izay hihidy mandritra ny volana aogositra manontolo. Misaotra...Read more
Sorona Masina 23 jolay 2017
Miarahaba antsika rehetra Araka ny efa nolazaina teto sy naverina tao am-piangonana dia any amin-dry masera Petite Soeurs de Jésus (Tre Fontane) isika no mivavaka amin'ny alahady ho famaranana ny...Read more
Fanamasinana ho diakra an'i Fr Angelo, sdv, tany Pompei.
Mandray tànana an'i Fr. Angelo Hasina, sdv, tamin'ny fahatontosan'ny fanamasinana azy ho Diakra tany Pompeï (NA) ny zoma 30 jiona lasa teo. Hitantana anao hatrany ao anaty Sahany ao anie Izy Tompo...Read more
Fankalazana ny taon-jobilin'ny Fiangonana SS Trinità ao Naples
Soa ny fiarahana, soa ny vita. Manolotra sy mampita ny fankasitrahana izahay Ankohonana aty Napoli tamin'ny nanotronanareo ny fankalazana ny jobily faha-50 taonan 'ny Eglizin'ny Trinite Masina izay...Read more
Na dia tsy hisy stands toa ny mahazatra aza amin'ity taona ity dia misy kosa ny lamesa sy ny sakafo amin'ny Festa dei Popoli. Koa mandray anjara amin'izany isika. Amin'ny lamesa dia mihira ny Tompo ô...Read more
Jobily faha-25 taona naha-relijiozy.
Io izany ny hafatra avy any amin'izy telo mianadahy - i Fr. Omar, Sr. Pierrette, Sr. Liliane - izay niara-nisaotra an'Andriamanitra tamintsika noho ny faha 25 taona naha relijiozy azy ireo omaly. Dia...Read more
Fanasana Jobily 25 taona Alahady 23 Aprily
Ao anatin'ny fankalazana ny faha 10 taonan'ny Ankohonana Victoire Rasoamanarivo eto Roma dia faly manasa antsika rehetra ihany koa Frera ANDRIAMBAHOAKA O. Génao Patrick (fsc) sy Masera...Read more
Fanasana avy amin'ny FFKM
Amin’izao volana manokana ho an’ny “Firaisan’ny Kristianina” sady ho “Fifampiarahabantsika” amin’izao taona vaovao izao. Dia manainga antsika Malagasy tapaka sy namana rehetra, amin’ny fiombonam-...Read more